အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လယ်ယာမဟုတ်သောစီးပွားရေး ကဏ္ဍ၏ လစဉ်အပြောင်းအလဲဒေတာ (NFP)ကို ၀၃:၃၀နာရီ ညနေ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်မယ့်ကိစ္စသည် အမေရိကအလုပ်သမားဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်. အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုများလာလေလေ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းလာလေလေဖြစ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများလာလေလေ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးလာလေလေဖြစ်ပြီး ငွေလဲနှုန်းတန်ဖိုးကို ကျဆင်းစေပါသည်. ဒေတာကိန်းဂဏန်းများကောင်းမွန်ပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျတက်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ငွေကြေး ဒေါ်လာ တန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်. ဒေတာကိန်းဂဏန်းများသည် မျှော်လင့်ထားသောနှုန်းထားထက် လျှော့နည်းခဲ့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ပါသည်. အမေရိကန်အလုပ်သမားရေးရာဌာနကနေပြီး NFP နှင့်အတူအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာရရှိမှုအခြေအနေများကိုလဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့်လည်း ငွေကြေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲရန် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရန် ယခုစီးပွားရေးဒေတာအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါသည်.ထို့်ကြောင့် ယခုဒေတာသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးနှင့် အခြားငွေကြေးအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.